အမေဇုန်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုရှင်သန်နိုင်သလား။ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အမေဇုန်သည်သက်ရှိများအတွက်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အရေးအပါဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပျိုစင်သစ်တော၏မူလနေရာဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအပင်များသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုစုပ်ယူပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ရန်များစွာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုရှင်သန်နိုင်သလား။
မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းသစ်တောပြုန်းတီးမှုသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ လူ ဦး ရေတိုးလာခြင်းကြောင့်လမ်းများဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်လယ်ယာမြေများကိုမကြာသေးမီကမှစိမ်းလန်းသောသဘာဝရှိသည့်နယ်မြေတစ်ခုတွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှမိုးရွာသွန်းမှုစနစ်ပြောင်းလဲလာပြီးသီးနှံများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Aprilပြီလအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်သိသိသာသာပျက်စီးမှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ Mulato, Mocoa နှင့် Sangucayo မြစ်များသည်သာပြည့်လျှံသွားခဲ့သည် (Putumayo ဌာန၊ ကိုလံဘီယာ) လူ ၃၀၀ အသက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့သည်ဒါပေမယ့် ခြောက်လမိသားစုများကို 30 စားစရာမရှိဘဲထားခဲ့ပါ အမေဇုံသစ်စေ့စုဆောင်းခြင်းသည် ၈၀% လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့်ဟုအမေဇုံညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (WWF LAC) မှ Analiz Vergara အဆိုအရ အစိမ်းရောင် Efe.
ဤဖြစ်စဉ်များသည်အနာဂတ်၌ပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်နိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောဖြစ်ရပ်များမဟုတ်ပါ။ ရာစုနှစ်အကုန်တွင်အမေဇုန်၌အပူချိန် ၃ ºCမြင့်တက်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည်, တောင်အမေရိက၏ရာသီဥတုကိုထိန်းညှိသောသံသရာအတွက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက်များမှာများစွာသော သစ်တောများ၊ မိုးခေါင်မှုနှင့်ရေကြီးမှုများတိုးများလာသည်.
အမေဇုံသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုရှင်သန်နိုင်မည်လော။ ဒါဟာလူ့ဖြစ်တည်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါက၎င်းမှာပြproblemsနာများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း ဆက်လက်၍ သစ်တောပြုန်းတီးမှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့သောပျက်စီးမှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည့်ပြproblemsနာများစွာရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » အမေဇုန်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုရှင်သန်နိုင်သလား။
နောက် 'ရာစု၏ငလျင်' သည်ချီလီတွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်